Consuelo López-Zuriaga. Ukuxoxisana nowamanqamu weNadal Prize | Izincwadi Zamanje
Consuelo López-Zuriaga. Ukuxoxisana nowamanqamu weNadal Prize
Izithombe: Consuelo López-Zuriaga. Iphrofayela ye-Facebook.
U-Consuelo López-Zuriaga fue owamanqamu weNadal Award yokugcina ngenoveli Mhlawumbe ekwindla, ayishicilela ekupheleni kuka-Ephreli. Kulokhu ingxoxo Usitshela ngaye nokufika kwakhe kwakamuva emhlabeni wokushicilela. Ngiwazisa kakhulu umusa nesikhathi sakho.
Consuelo López-Zuriaga. Ingxoxo
UMBHALO MANJE: Mhlawumbe ekwindla Kuyinoveli yakho yokuqala futhi uke waba ngowamanqamu eMklomelweni wokugcina weNadal. Usitshelani ngakho futhi umqondo wavelaphi?
I-CONSUELO LÓPEZ-ZURIAGA: Mhlawumbe ekwindla khuluma nge ukuntengantenga kokujwayelekile kwempilo yethu. Impilo yansuku zonke ingashintsha kanjani, ngokuphazima kweso, lapho ihlangana nokufa. Indaba izama ukuthatha lowo mzuzu lapho okujwayelekile kuphela khona.
Ngokuqondene nesakhiwo, isitshela ukuthi impilo ye- UClaudia Figueroa, ummeli okhaliphile ozinikele ekuvikeleni amalungelo abantu, uthatha ithuba elikhulu lapho Mauricio, umlingani wakho, uthola ukuthi une- umdlavuza osezingeni eliphezulu. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, umlingiswa ophambili kumele enze izinqumo ezibalulekile ezizothinta lokho, kuze kube yileso sikhathi, obekuyimpilo yakhe nezifiso zakhe. Ngaphandle kwebalazwe noma ikhampasi yokubhekana nokubhujiswa kwalesi sifo kanye nokungaqondi ngokufa, uzoqala indlela azophikisana ngayo phakathi kokwesaba ukulahlekelwa yindoda ayithandayo, ikhefu ngempilo yakhe yangaphambilini nokwazi ukuthi ngeke aphinde afane.
Ngamafuphi, Mhlawumbe ekwindla kulandisa a Ukuguqulwa kokuguqulwa isiphetho saso sokugcina ukunqoba ukwesaba ukuyeka ukuba yilokhu esihlale siyikho.
Umqondo wenoveli une- umlando kanye neminye imibhalo. Ngokuqondene neyokuqala, kuqhamuka kokuhlangenwe nakho kwami ​​nomdlavuza kanye nomthelela okutholwe wumlingani wami ezimpilweni zethu. Ngokuphathelene nowesibili, icebo lale noveli nezwi layo elilandisayo lavela emazwini ka- UJoan Didion, nini en Unyaka Wokucabanga Kwemilingouthe: «Uhlala phansi udle futhi impilo obukade uyazi ukuthi isiphelile ». Ukufunda i-Didion kunginike ithoni yenoveli. Ungumbhali onekhono elisabekayo loku landisa amaqiniso ngokumangalisayo okuphawulekayo sempilo yabo ngokunemba cishe kokuhlinzwa, kude nokuhlukunyezwa nanoma yikuphi ukuzwela. Bengifuna ukubeka izwi elilandisayo likaClaudia kulelo rejista, lapho imizwa inganciphisi noma yeqise, kepha ifinyelela kumfundi ngokugcizelela.
AL: Uyayikhumbula incwadi yokuqala owafunda? Nendaba yokuqala oyibhalile?
CLZ: Izincwadi zokuqala engikhumbula ukuzifunda yilezo ezenziwa ngu Enid Blyton. Izazi Ezintathu zihlala zifika zilayishe amakhophi athile Abahlanu, Izimfihlo Eziyisikhombisa noma kuleso sikole okuhlalwa kuso - ngaphambi kukaHarry Potter kodwa futhi neBrithani kakhulu - eyayikhona Malory Towers. I-Los amathinki, ngendwangu yomgogodla, kusuka ekuqoqweni komfowethu kanye nokuzijabulisa kwe I-Asterix ne-Obelix Bangiphelezela nokudla okulula kwesinkwa okunoshokoledi.
Ngangiyintombazane engenisiwe futhi ngifunda futhi, mhlawumbe ngenxa yalesi sizathu, ukubhala ngokushesha kwahluma ngesimo se-pukulandisa okuncane nezindaba. Izindaba ayezigcina ezincwadini zamabhuku, zihambisana nemifanekiso nama-collages, njengezinsalela zempilo ebisiqala ukuphuma.
KUYA KU: Umbhali oyinhloko? Ungakhetha ngaphezu kweyodwa nakuzo zonke izinkathi.
I-CLZ: Akunakwenzeka ukuyinciphisa ibe munye kuphela, kunababhali abaningi abangikhuthazile futhi engithole ukuthi "uhambo olukhulu lokuya eqinisweni" olufundayo. Ngithanda ababhali bamanoveli bekhulu le-XNUMX namandla abo amakhulu okulandisa njengo UFlaubert, uStendhal, uTolstoy, uDostoyevsky, UDickens, Galdós noma Clarín. Kepha ngithanda kakhulu ukubukeka okonakalisayo okwenziwa ngabantu baseMelika ngokoqobo, Hemingway, Dospassos, Scott Fitzgerald, Cheever noma uRichard Yates.
Futhi angikwazi ukukhohlwa lezo ababhali abanolwazi ngenoveli futhi, ngasikhathi sinye, ngibuze umbuzo wami wokulandisa njengo UFaulkner, uCortázar, uKafka noma uJuan Rulfo. Futhi ezikhathini zakamuva nje, nginikezwe ukwesaba ubuhlakani bokulandisa ULucia Berlin kanye nekhono lakhe lokuguqula izingcezwana zeskwidi zibe izindaba eziluhlaza.
I-CLZ: UGregory samsa, umlingiswa ophambili we Ukuguqulwa komzimbaKubonakala kimi kungumlingiswa ongajwayelekile oveza izingqimba eziningi futhi ongabonisi isizungu nobuhlungu bendawo yonke, kanye nokudelela omunye, ohlukile, umfokazi.
Futhi U-Emma bovary Yindalo enkulu ebhekise ekuqothulweni kothando lwezithandani nobuthi obungokomzwelo, iba yi-archetype engangabazeki.
CLZ: Nginemikhuba embalwa. Ngincamela ukungazibeki esimweni sami. Ngidinga nje sIlencio, ikhofi netafula elicacile. Ukubhala kufanele ngizilalele, kubalulekile ukulalela abalingiswa bese ngibona ngeso lengqondo izigcawu ukuze indaba iqale ukukhuphuka esikrinini se-laptop.
AL: Futhi indawo yakho oyithandayo nesikhathi sokwenza?
CLZ: Ngibhala ngithule. Ngidinga ukuzihlukanisa ukubhala kanjalo, njengoba ngihlala ezweni, ngithole indawo ephelele. Ukushintsha imigwaqo yaseMadrid kube ihlathi kwandise ikhono lami lokugxila. Futhi, lapho ngibambeka, ngibiza ama-bitches bese ngiyozulazula ehlathini. Kodwa-ke, angicabangi ukuthi kufanele ulinde "ikamelo lakho", ideski lamakholoni noma isifundo esinombono wolwandle. Lapho le ndaba ihlala ngaphakathi kuwe, qhubekela phambili ngokuphuthuma, ngaphandle kokuma noma ngabe ukuphi. Ngibhala kahle ekuseni kakhulu lapho umsindo wosuku ungakafiki ekhanda lami nomlando ugibela ngaphandle kokuphazamiseka.
Ngingene funda ulele kusofa noma ukwenze embhedeni, yize nami ngafunda ebhasini, eMetro, ezitimeleni nasezindizeni, emagumbini okulinda nanoma yikuphi, lapho le ndaba ingibamba futhi ngishwabadela ikhasi ngalinye lencwadi ngize ngifike ekugcineni. Phakathi kwezinto eziyinkulungwane engiziphatha esikhwameni sami kuvame ukuba nencwadi.
KUYA KU: Zikhona ezinye izinhlobo ozithandayo?
CLZ: Nami ngiyafunda ukuhlolwa, umlando wobuciko futhi ngiyayithanda i- inoveli yomlando. Ngaphandle kwendawo yombhalo kuphela, ngithanda i-botany nezincwadi zokupheka.
KUYA KU: Ufundani manje? Futhi ukubhala?
CLZ: Muva nje ngifunde i-trilogy enhle kakhulu ye- URachel Cusk, Ukukhanya kwangemuva, Ezokuthutha y Ubukhosi. Ngithole okungajwayelekile ukuthi indlela Ukungabi bikho kwesakhiwo, somqondo wokusebenza kwembangela, kude nokusisa esikhaleni, kusiholela kumfanekiso wezingcezwana ezithatha konke nokwakha inoveli uqobo. Nami nginjalo ukufunda kabusha a Miguel Delibes placeholder image, umbhali omkhulu ongadumazi nanini.
Ngokuqondene nokubhala, ngisesigabeni se- ngihlela inoveli yami elandelayo. Indaba ngamandla wezimfihlo: lezo ezikhiqiza ukuhlengwa futhi, lezo, okungcono ukuthi ungazivezi.
KUYA KU: Ucabanga ukuthi isimo sokushicilela sinjani futhi yini yanquma ukuthi uzame ukushicilela?
I-CLZ: Ngisanda kufika emhlabeni wokushicilela, ngakho-ke anginakulokotha ngihlaziye okuphelele ngesimo sayo samanje. Imibono yami yokuqala iyindida. Ngibona imakethe egcwele, enemibhalo yesandla eningi kakhulu, akunakwenzeka ukudlulisa kubashicileli abavamile; ngakolunye uhlangothi, ngibona futhi a uhlelo ekuguqulweni, lapho kuvela khona ezinye izindlela namafomethi okuthakazelisa kakhulu, nalapho ukuncintisana nezinye izinhlobo «zokuzijabulisa» kunolaka. Ngamafuphi, kukhona ifayela le- ukungezwani phakathi kokuwa nokuqanjwa okusha.
Isinqumo sami sokuzethula sihlotshaniswa ne- ukukholelwa ukuthi yena Incwadi igcwaliswa lapho umfundi efika ekhasini lokugcina. Ngicabanga ukuthi imilingo yezincwadi ikulolo hambo lokuya nokubuya phakathi kombhali nomfundi. Le noveli, Umberto Eco isivele isho, «kungumshini wokuhumusha ».
KUYA KU: Ngabe isikhathi senhlekelele esibhekene naso sinzima kuwe noma uzokwazi ukugcina okuthile okuhle ngezindaba ezizayo?
I-CLZ: Unyaka odlule ubunzima kakhulu futhi udabukisa abantu abaningi, kepha mhlawumbe ingxenye enhle kube ukuthi ubhadane lukhombisile ubuhlalu obubalulekile bezimpilo zethu nokungenangqondo kokuzikhukhumeza okukhona. Cishe sazi kangcono. Esinye isici esibalulekile yi- ukwanda kokufunda. Abantu abaningi babuyile ezincwadini bebheka emakhasini abo ukugwema, ukunethezeka, ukufunda ... Ngamafuphi, umlingo wezincwadi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izingxoxo » Consuelo López-Zuriaga. Ukuxoxisana nowamanqamu weNadal Prize